War laga soo saaray hubka lala galo Garoonka Aadan Cadde | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasaaradda Amniga ee Xukuumadda Federaalaka Soomaaliya ayaa war ka soo saartay hubka lala galo Garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde, oo gudahiisa ay dhaceen dhowr dhacdo oo kamid ah dilkii Almaas Elman sanadkii tagey.
Saraakiisha sare ee dowladda Soomaaliya ayaa iyagoo la baarin oo wata Ilaaladooda toos u gali jiray Garoonka, oo amnigiisa AMISOM gacanta ku hayso.
"Wasaaradda Amniga XFS ayaa shaacisay in la joojiyay hubka lala galayo gudaha garoonka Diyaaradaha Aadan Cade, marka laga reebo ilaalada madaxda Sare ee Qaranka.ka," ayaa lagu yiri qoraal Wasaaradda soo saartey.
Saraakiisha Ciidamada, Shaqaalaha Wasaaradaha, Xildhibaanada iyo cid kasta oo dowladda Soomaaliya katirsan hubna haysata si toosa ayey gudaha ula gali jireen, laakiin amarkan ayaa noqon doona mid looga nasto hubka tirada badan ee gudaha lagu dhex wato.
0 Comments Topics: garoonka diyaaradaha soomaaliya